The main umthwalo obusebenzayo emzimbeni wethu kungokwalabo emikhawulweni, ikakhulukazi izingxenye distal yalo (ie, kude kakhulu emzimbeni) - ezandleni nasezinyaweni, nge semali ezihlukahlukene ukunyakaza ezincane. Kwemvelo high umthwalo ongako functional ezandleni nasezinyaweni ngenxa ekuthuthukeni kwabo kanye ngcono. Ngale ndlela-ke kwamiswa, eqinisweni, isici esikhethekile umzimba womuntu - isithupha kuqhathaniswa umshanelo. Kuyinto lesi sici muntu obekade amandla ukuze athuthukise futhi ziphenduke. Kakhulu izandla levakalako zinezinyawo izici esiyingqayizivele kwesakhiwo, okuyinto ziwenza akwazi ukuthola ukuthi enze inqwaba imisebenzi kudingekile ekuphileni. Yingakho kusukela iphuzu yokwakheka buka, isakhiwo unyawo yomuntu, kanye nokwakheka uhlangothi, Sinesithakazelo esikhulu.
isakhiwo unyawo sici khona okuthiwa igobela le unyawo. Arch eyenza umsebenzi obalulekile kakhulu - isinxephezeliso ingcindezi zomzimba. Kanye kwakhiwa ukuma aqonde zaholela ekwakhekeni lwaleli, ngenxa okwanda umthwalo nasemilenzeni aphansi.
Isakhiwo unyawo lomuntu, eqinisweni, uhlukile asikho isilwane ngoba has iqoqo okungenhla. Kodwa kungcono ezihambelana kuya izitho zomzimba futhi functional imithwalo, njengoba ngoba wona kanye nokwakheka senyawo, it is emelelwa amathambo eziyishumi, inani elikhulu izinyanda ngeziqu isici jointed izakhiwo emathanjeni nokudleka imisipha.
Arch kumiswa a lwaleli transverse olulodwa futhi ezinhlanu longitudinal. Five nemengamo longitudinal kude calcaneus unyawo enamathiselwe imishayo abafanele. lwaleli transverse kwakhiwa ngenxa uhlobo ngokuhlanganyela phambi longitudinal ezinhlanu.
Isakhiwo unyawo lomuntu, ngokukhethekile, egumbini layo, kubangelwe ukusekela nemisipha nemisipha ukuthi ungavumeli ukwehlisa cabaza usizo amortization umsebenzi unyawo. Endabeni obumba isethi buthakathaka izicubu nemisipha lwaleli ngezinyawo kungase isicaba, kuphumele flat.
Isakhiwo unyawo lomuntu kodwa esinye isici wase- khona innervation luningi. Lokhu-ke kuholela ekwakhekeni okubizwa ngokuthi esishintshashintshayo reflex. esishintshashintshayo Reflex Kayisilutho ngaphandle owela of yezinzwa futhi endaweni yawo. Lokhu ukusondela kuholela nokuxhumana bidirectional izinzwa ezahlukene ngokuphelele. Ngenxa yalokho perekrestov nezinzwa ka izandla nezinyawo kanye nezinzwa visceral (lezo innervate kwezitho zangaphakathi) futhi kwakhiwa elihambisana zone reflex we esitobhini.
Akwaziwa kusukela ezikhathini zasendulo futhi isetshenziselwe izindlela usuku kwethonya amaphuzu athile reflexology - ukutshopa - kwanikeza abantu ithuba ngokudalula ezindaweni ezizwelayo ngomzimba womuntu kwamanzi unikeze isenzo esidingekayo futhi izibilini, inkanuko umsebenzi wabo.
I-acupuncture unyawo yi-amabalazwe olufanele ebonisa lapho indawo ye unyawo Kumelwe wenze ukuze nemiphumela ebesiyilindele. Ngakho, ematheni onyawo kuze kufike kwesokudla unesibopho imiphumela phezu kwezitho zomzimba kwesokunene nezinhlanu kwesobunxele, ngokulandelana, ngoba umthelela uhhafu kwesokunxele izitho zomzimba.
Acting on the amaphuzu ukutshopa ematheni onyawo, izazi libe nethonya ezidingekayo ku ubuchopho, cerebellum, le sinuses frontal engeziwe, le ndlala pituitary emsipheni trigeminal, intamo, indlebe, amakhala, namehlo, emahlombe, ngisho imisipha ngabanye. Kepha umthelela izibilini, kungashiwo isehlane esebenzisa ukutshopa ukuze isebenze kwezitho zomzimba womuntu.
Kanjani ukwenza i enema ekhaya
Ukuphumula kwamanyuroni ngu Jacobson
Izitolo imigexo Ukukhanya kwelanga: ukubuyekeza abesifazane ku ukuthenga, ukukhushulwa, izaphulelo
Umhleli wezinto ezincane ngezandla zakho. Indlela yokuqoqa amapokhethi wezinto ezincane wena: isigaba samakhono